heart care – Healthy Life Journal
All posts tagged "heart care"
အကောင်းဆုံး နှလုံးရောဂါကာကွယ်ရေး နည်းသုံးသွယ်
———၊ ဇွန် ၊——— နှလုံးရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကေခမ်းက နှလုံးရောဂါကာကွယ်ရေး အကောင်းဆုံးနည်းသုံးသွယ်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ နည်းလမ်း (၁) မှန်ကန်သည့် စစ်ဆေးမှုခံယူခြင်း အီးစီဂျီစစ်ဆေးမှုလို အခြေခံပုံရိပ် ဖော်စစ်ဆေးနည်းတွေဟာ နှလုံးသွေးကြောပိတ်ဆို့မှုကို သိနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ စစ်ဆေးမှုကြောင့် သွေးကြောပိတ်ဆို့မှုကို တွေ့ရှိရင် အက်စပရင်ဆေးသောက်တာ၊...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဒီခေါင်းစဉ်တွေ့လိုက်တာနဲ့ အရက်သောက်တတ်သူတွေက မဖတ်ဘဲ ကျော်ချင်ကျော်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် . . အရက်က အသည်းကို ထိခိုက်စေတာအမှန်ပါ။ ဒါကြောင့် အရက်ကို မသောက်ဘဲနေတာ အကောင်းဆုံးပေါ့ . . ဒါပေမဲ့ အရက်ကို...
အိပ်ရာမဝင်ခင် နနွင်းမှုန့်ခတ်ထားတဲ့ နွားနို့သောက်ပေးရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေပြောင်းလဲသွားနိုင်သလဲ . . .
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— နွားနို့အကြမ်းပန်းကန်လုံးတစ်ခွက်ထဲ နနွင်းမှုန့် လက်ဖက်စားဇွန်းတစ်ဝက်လောက် ထည့်မွှေပေးလိုက်ပါ။ အဲဒီနွားနို့ကို ညအိပ်ရာမဝင်ခင်သောက်ပေးရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကောင်းကျိုးများစွာ ရရှိစေပါတယ်။ နေ့စဉ်သောက်ပေးရင် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို သန်စွမ်းစေပြီး အသည်းကနေ ခန္ဓာကိုယ်ကို သန့်စင်စေပါတယ်။ ကင်ဆာကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ (၁)...
အသည်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာ အဓိကအရေးပါတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သလို အံ့ဖွယ်ဘနန်းစွမ်းရည်တွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ အသည်းက အဓိကအားဖြင့် သည်းခြေရည်ထုတ်ပြီး အစာချေဖျက်တဲ့စနစ်ကို အထောက်အကူပြုပါတယ်။ အသည်းရဲ့ဒုတိယအရေးကြီးဆုံး လုပ်ငန်းကတော့ အသားဓာတ်၊ အဆီဓာတ်၊ ကစီဓာတ်တွေရဲ ့...
အိမ်နီးချင်းကောင်းရှိတဲ့သူတွေဟာ နှလုံးရောဂါ အမောဖောက်ခြင်း (Heart Attack)ဖြစ်နှုန်း ၂၂ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းမှုရှိတယ်လို့ ၂၀၁၄ မီချီဂန်တက္ကသိုလ်ရဲ့လူငါးထောင်ကို လေးနှစ်ကျော်ကြာ လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းတွေရဲ့မကောင်းတဲ့ တုံ့ပြန်မှုကြောင့် သွေးဖိအားမြင့်တက်စေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်း ကော်တီစောအဆင့်တိုးမြင့်ကာ...
အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်းက နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့ကျစေနိုင်
———၊ ကိုထက် ၊——— အပန်းဖြေခရီးထွက်တာဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးတွေများကြောင်း လေ့လာမှုတွေ ရှိပါတယ်။ ယခုလေ့လာမှု အသစ်တစ်ရပ်မှာလည်း အပန်းဖြေခရီးထွက်တာဟာ နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို များစွာလျော့ကျစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုကို နယူးရော့ခ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနမှ လက်ထောက်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဘရေ့ဟူစကာက ဦးဆောင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။...
နှလုံး-အပေါက် (Atrial Septal Defects-ASD)
———၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— Q. ကျွန်တော်က အခု ၂၅ နှစ်ထဲမှာပါ။ အသက် ၂၁ တုန်းက ASD (Atrial Septal Defect) ခွဲဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော်က အခု (…..) နိုင်ငံက ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတာပါ။...